Ahoana ny fomba handresena ny famoizam-po araky ny Baiboly ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana ny fomba handresena ny fahakiviana araka ny Baiboly
Ahoana ny fomba handresena ny fahakiviana araka ny Baiboly. Ny fahasahiranana eo amin'ny fiainana indraindray dia miteraka fahasosorana be loatra ka ahafahan'izy ireo mamela antsika tsy misy angovo. Matetika isika no mahatsapa fa tsy afaka mifehy ny zava-drehetra latsaka ao anaty fangidiana mangidy izay manimba ny fanahintsika. Na izany aza, tamin'ny alàlan'ny ny finoana sy ny fo manapa-kevitra ny hanova ny toetrantsika, mety ho afaka isika ovao ity toe-javatra ity ary mandresy ny hakiviana.
Raha kristianina ianaoTokony ho tadidinao fa i Jesosy, tamin'ny teniny, dia nilaza tamintsika mba hanana toe-tsaina tsara. Noho izany, zava-dehibe izany tadidio fa tsy irery isika rehefa mandalo ireo karazana toe-javatra ireo isika.
"Izany no nilazako izany mba hanananareo fiadanana amiko. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; na izany aza, mahereza! resy el tontolo"
(Jaona 16: 33)
Mba hanampiana anao handresy ny hakiviana dia nanangona ireto dingana 5 ireto izahay hanampiana anao ho tonga any:
1 Ahoana ny fomba handresena ny famoizam-po araka ny Baiboly amin'ny dingana 5
2 1. Ekeo ny hakiviana
3 2. Diniho izay antony mahatonga ny fahakiviana
4 3. Fanafihana ny antony mahatonga ny olanao amin'ny fitaovam-piadiana nomen'Andriamanitra anao
4.1 Olana mahatsapa
4.2 Olana amin'ny fahazaran-dratsy
4.3 Mitadiava fanampiana avy amin'ny manam-pahaizana
5 4. Miantehitra amin'i Jesosy
6 5. Velomy indray ny sainao, ny vatanao ary ny fonao
6.1 1. Tandremo ny sainao:
6.2 2. Karakarao ny vatanao!
6.3 3. Mampiasà fihetsem-po voalanjalanja
Ahoana ny fomba handresena ny famoizam-po araka ny Baiboly amin'ny dingana 5
Raha kivy ianao Ary hitanao fa any amin'ny faran'ny maty ianao, tsy maintsy holazainay aminao izany tsy irery ianao ary misy fomba handresena azy. Vakio tsara ireo torohevitra dimy, ary ambonin'izany rehetra izany, tsarovy fa ny dingana voalohany ny fampitsaharana ny hakiviana dia vonona ny hiova.
1. Ekeo ny hakiviana
Tokony hotadidinao io fahakiviana io mety ho lasa fahazaran-dratsy. Mba hanovana izany fanjakana ratsy izany dia tsy maintsy ekenao fa ao anatiny ianao. Miseho amin'ny alàlan'ny tsy miraharaha na mankaleo. Amin'ny ambaratonga mampihetsi-po dia azonao atao ny miaina havizanana, fanahiana, alahelo, na famoizam-po. Ary koa, afaka manana ara-batana ianao olana ara-organika toy ny korontana hormonina na tsy fahampian'ny vitamina. Noho izany, zava-dehibe ny handinihanao raha toa ny sasany amin'ireo safidy ireo no mahazo anao.
2. Diniho izay antony mahatonga ny fahakiviana
Tena ilaina io dingana io. Tsy maintsy mandini-tena ianao ary mahita izay mahatonga ny fahakiviana. Rehefa tsy takatsika ny antony mampalahelo antsika dia sarotra ny hamahana ny fototry ny olana. Noho izany, andramo jerena ny antony.
Maro ny antony mahatonga anao hahakivy:
Diniho hoe iza amin'izy ireo no mahatonga ny olanao ary amin'ity fomba ity dia ho azo inoana ho anao ny mahita ny vahaolana.
3. Fanafihana ny antony mahatonga ny olanao amin'ny fitaovam-piadiana nomen'Andriamanitra anao
Manolotra ny valiny amin'ny antony rehetra mahatonga ny fahakiviana ny Baiboly. Aseho azy ireo eto:
Tsy fahampian'ny antony manosika: ataovy ny zavatra rehetra toa an 'Andriamanitra. (Kolosiana 3: 23-24)
Olana ara-bola: hendry amin'ny fitantanana ny volanao ary matokia ny famonjen'Andriamanitra. (Filipiana 4: 19)
Tsy fisian'ny fitsaharana: Aza adino fa ny fitsaharana dia ara-Baiboly, Andriamanitra mihitsy no nanome ohatra ho antsika. (Eksodosy 34:21)
Tsy fahampian'ny finoana: Ny finoana dia azo amin'ny fihainoana (famakiana, fisaintsainana, fandalinana) ary fahalalana ny Tenin'Andriamanitra. (Romana 10: 17)
Hakamoana: Mampitandrina antsika momba izany ratsy izany ny Baiboly. (Ohabolana 6: 6-11)
Tsy azo antoka: Ny fahatokiana an'Andriamanitra dia mitondra filaminana ao am-pontsika. (Nahoma 1: 7)
Famokarana ambany: miezaha hanao zavatra izay manampy anao sy ny hafa. (Mpitoriteny 9: 10)
Fotoana fandaniana: mila mampiasa fotoana mazoto isika. (Efesiana 5:16)
Tsy fahampian'ny vavaka sy fankasitrahana: mampivelatra ny fiarahana amin'Andriamanitra isan'andro. (1 Tesaloniana 5: 17-18)
El faritra ara-pihetseham-po dia saika ny tena voa mafy indrindra, ary saika misy ifandraisany foana fanantenana tsy ampoizina. Mivavaha ary mangataha amin'Andriamanitra mba hiatrika ny fihetsem-ponao. Ny tsy fandanjalanjana ara-pientanam-po dia mety hanary ny faritra hafa rehetra amin'ny fiainana tsy voalanjalanja. Raha nanana olana ara-pitiavana ianao, tapaka fifandraisana, tsy fitiavana, na nandiso fanantenana tamin'ity lafiny ity, dia mety ho fotoana fialantsasatra izao.
Ny fanaintainana dia mety toa tsy sitrana, Andriamanitra dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanasitranana ny fanaintainan'ny olombelona rehetra. Mitadiava fanasitranana ao Aminy, satria hainy ny manamboatra fo torotoro. Sarobidy ianao ary miahy anao i Jesosy.
Atolory ny Tompo ny fonao hikarakara azy. Tadiavo ny fahafenoana ao Aminy ho faly tanteraka. Omeo fotoana ny tenanao hamerenana amin'ny laoniny ny fiadananao anaty. Ka avelao Andriamanitra hanaitra anao amin'ny zavatra ho avy.
Olana amin'ny fahazaran-dratsy
Tena sarobidy ianao, noho izany dia tokony hikarakara ny tenanao ianao ary hahafantatra ireo famantarana omen'ny vatanao anao. Mety hampahafantatra anao fotsiny izy fa mahatratra ny fetrany ary mila miala sasatra sy mamelombelona izy. NILA mamolavola fahazarana tsara isan'andro mba hisorohana ny fahazaran-dratsy tsy hitana.
Mitadiava fanampiana avy amin'ny manam-pahaizana
Raha tsy hitanao ny antony "miharihary" hahakivy anao dia mijereva fanampiana ara-pitsaboana.. Makà fizaham-pahasalamana. Mety misy fifandraisana misy eo amin'ny toe-pahasalamanao sy ny fiovan'ny fahasalamanao.
4. Miantehitra amin'i Jesosy
Fantatry ny Kristiana tsirairay avy fa tsy avy aminy irery ny heriny ary tsy tokony hofehezina amin'ny toe-javatra izany. Ka rehefa manomboka kivy na tsy afa-manoatra amin'ny zavatra iray ianao dia tadidio izany zanak'andriamanitra ianao. Ny fanampian'izy ireo dia hahafahanao mandresy ireo sakana izay mahazo anao. Ankoatr'izay, misy zava-misy mahafinaritra hafa: ny Fanahin 'Andriamanitra mitoetra ao am-ponao, misaotra azy ianao dia afaka miatrika ny zava-tsarotra rehetra amin'ny herimpo.
5. Velomy indray ny sainao, ny vatanao ary ny fonao
1. Tandremo ny sainao:
Mamolavola eritreritra tsara: Nandeha ilay ohabolana taloha hoe "a ny saina tsy misy olona no laboratoaran'ny devoly ». toy izany miezaha mameno ny hevitrao amin'ny Tenin'Andriamanitra.
Halalino bebe kokoa: Mahafinaritra ny mianatra ho mandrakizay ary mianatra zava-baovao. Mieritrereta lalina kokoa momba ny zavatra: Andriamanitra, fiainana, FAHAFATESANA, izao rehetra izao, siansa, kolontsaina, zavakanto, sns.
Manompoa an'Andriamanitra amin'ny fomba ara-dalàna: atolory an'Andriamanitra isan'andro ny fiainanao. Na dia mila ezaka bebe kokoa aza izany. Amin'ny farany dia hahazo ny valisoa ianao.
Havaozy ny sainao: Mampianatra ny Baiboly fa tokony hanavao ny fahalalantsika isika fa tsy handray ny fomban'izao tontolo izao. Hanavao ny sainao amin'ny tenin 'Andriamanitra.
2. Karakarao ny vatanao!
Ireo izay kivy dia mazàna manao tsirambina ny vatany ary mampihinana sakafo ratsy mandingana sakafo na manonitra amin'ny fihinanana be loatra. Inona koa, hakamoana manelingelina ny fahombiazantsika ara-batana sy ny fikarakarana fototra antsika koa toy ny fahadiovana sy ny hatsarana. Mba tsy hitrangan'izany dia tsy maintsy:
Misakafo tsara: Ny tsy fihinanan-tsakafo tsy mahasalama dia manelingelina ny zava-bitantsika isan'andro, noho ny tsy fisian na fihoaram-pefy sasany. Ny sakafo sasany dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny vatantsika, ao anatin'izany ny toetrantsika. Noho izany, misafidy sakafo mahasalama, mihinana antonony ary misotroa rano bebe kokoa.
Manaova fanatanjahan-tena: Miezaha hanana a fiainana mavitrika: mandeha matetika kokoa, misafidy ny hiakatra sy hidina amin'ny tohatra fa tsy handray ascenseur foana, maninjitra ny maraina, manadio trano, mandihy, milalao amin'ny ankizy, milalao fanatanjahan-tena na manao fanatanjahan-tena tsy tapaka.
Mitandrema amin'ny asa be loatra: mitafy noho ny be loatra ny asa antony iray hafa mahatonga ny olana ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-pianakaviana izany. Ny adin-tsaina, ny tsindry ary ny fitakiana mihoapampana eo am-piasana koa dia miteraka fahakiviana, havizanana ary fihenjanana eo amin'ny fifandraisana ara-tsosialy.
Karakarao ny bika aman'endrinao: Ny fisehoana dia tsy ny zava-drehetra, fa zava-dehibe. Tandrovy ny fahadiovanao manokana, fa tsy misy fihoaram-pefy. Akanjo sahaza ho an'ny tranga rehetra. Manaova fiatraikany tsara amin'ny fanatrehanao ny tontolo iainana, amin'ny fahamalinana, hatsaram-panahy ary hatsikana tsara. Miezaha mahazo torimaso tsara isan’andro ary hampivoatra toe-tsaina tsara. Farany, mianara tia ny tenanao.
3. Mampiasà fihetsem-po voalanjalanja
El Mila an'Andriamanitra Andriamanitra hitantana ny fihetsem-pony. The ny tsy fahampian'ny fandanjalanjana ara-pientanam-po dia mety hiteraka fahakiviana sy alahelo koa. Ny aretina ara-pihetseham-po dia manomboka miteraka fahatsapana ny tsy firaikana, tahotra, fialonana, lolom-po ary fijaliana. Ireo fihetseham-po ratsy rehetra ireo dia manimba ny fahasalamanao ara-pihetseham-po ary mila esorina amin'ny fiainanao. Noho izany:
Ekeo izany Andriamanitra no loharanom-pampaherezana ho anao sy fahafaham-po.
Mihainoa ny Tenin'Andriamanitra ary maneke.
Aza mitokantokana. Ny orinasan'ny olona tiantsika dia zava-dehibe.
Aza atao intsony tsy misy lisitra na mitebiteby. Mikarakara anao Andriamanitra !.
Mifalia: mianatra mankafy isaky ny fotoana ary tsarovy fa ny antsipiriany kely dia mety hanjary traikefa lehibe.
Ampiharo ny miala tsiny.
Ianaro ny fomba fehezo ny tsy fahafaham-ponao.
Tadiavo ny tanjonao amin'ny maha olona anao ary manolora tena ho azy ho voninahitr'Andriamanitra.
Izany no izy! Manantena izahay fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity. Raha izao dia te hahalala ianao ny fomba fananganana fanambadiana sambatra hoy ny Baiboly, manohy mizaha Discover.online.
Ahoana ny fomba handresena ny tahotra ny fahafatesana
Satria nanasa ny tongotry ny mpianany i Jesosy